Soo ogow magaalooyinka ugu fiican koonfurta Faransiiska inaad booqato | Bezzia
Tuulooyinka ku yaal koonfurta Faransiiska ee ay tahay inaad booqato
Susana Garcia | 02/06/2021 10:00 | nololeedka, safarka
La aagga koonfurta Faransiiska ayaa aad looga heli karaa Spain, gaar ahaan haddii aad ku nooshahay aaggaas xadka u dhow. Taasi waa sababta ay u tahay meel ay aad u booqdeen Isbaanishku oo doonaya inay soo ogaadaan geesaha Faransiiska oo ayan weli sahamin. Aaggan koonfurta, sida Faransiiska oo dhan, waxaa suurtagal ah in laga helo tuulooyin leh soojiidasho cajiib ah oo lagu booqan karo waqti gaaban.
Marka laga soo tago magaalooyinka, booqashada magaalooyinka yaryar waa wax weyn, maxaa yeelay waxay leeyihiin taabasho ka duwan, way ka xasilloon yihiin oo ka sii caado badan yihiin. Gudaha shucuubta koonfurta faransiiska waanu arki karnaa sida caadooyinkoodu yihiin magaalooyinka ay ka helaan saameyntooda Spain u dhow. Waxaan arki doonaa qaar ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan.
1 Carcassonne, qalcaddii dhexe
Carcassonne, qalcaddii dhexe
Meeshii qalcadda horeyba waxaa u deggenaa Roman oo qarnigii XNUMXaad qalcaddii ugu horreysay ayaa laga dhisay. Trencavels-ka ayaa ahaa kuwii dhisay qalcadda weyn ee hadda jirta, in kasta oo dhowr jeer dib loo dhisay. Qiyaastii qarnigii saddex iyo tobnaad ayaa dhismaha qaybta hoose ee loo yaqaan Bastida de San Luis. Waxaad si xor ah uga geli kartaa albaabka Narbonne, oo u dhow goobta baabuurta la dhigto, si aad u aragto maylalka dhaadheer. Gudaha gudihiisa waxaa ku yaal munaarado, dhowr albaab oo laga soo galo, Carcassonne Count Castle ama Saint Nazaire Basilica.
Qeybta Aveyron waxaad ka heli doontaa Najac, inta u dhexeysa buuraha cagaaran ee ku yaal dhul buuraley ah. Tani waa magaalo xiise leh oo leh nidaaminta meandering ee safka buurta korkeeda, halka uu ku yaalo qalcaddu. Plaça del Barry waa fagaaraha ugu weyn waana mid xiiso leh in la maro wadada kaliya ee loo maro qalcadda. Laga soo bilaabo qalcadda waxaa sidoo kale jira aragtiyo dusha sare leh ee aagga.
Belcastel waa mid ka mid ah magaalooyinka Faransiiska ku yaal ee na siiya si sax ah waxa aan raadineyno. Waxay leedahay buundo dhagax ah oo qurux badan laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad, guryaha dhagaxa ah ee jawiga dabiiciga ah ee cajiibka ah iyo xasillooni badan. Waxay kaloo leedahay qalcaddii dhagaxa XNUMXaad ee qarnigii XNUMXaad. Waad booqan kartaa qeyb ka mid ah qalcaddan, inkasta oo ay leedahay milkiileyaal gaar loo leeyahay. Ujeeddadu waa in lagu dhex maro magaalada si deggan oo loo ogaado geesaha. Waxaa jira dhowr meelood oo leh jaranjarooyin lagu nasto meel sidan oo kale ah.
Este magaaladu waxay ku taal Camino de Santiago waxayna ku taalaa inta udhaxeysa meelaha cagaaran ee cagaaran, sidaa darteed waa magaalo u taagan quruxdeeda iyo deegaankeeda. Waad u kici kartaa aragtida si aad u aragto magaalada Conques dabcan waa inaad ku dhex socotaa jidadkeeda si aad u aragto qaabdhismeedka miyiga ee cajiibka ah ee guryaha dhagaxa yar yar. Abbey-keeda weyn ee Romanesque ee leh Portico ee Xukunka Ugu Dambeeya ayaa muuqda.
Tani waa mid kale oo ka mid ah magaalooyin qurxoon oo qadiim ah oo ku yaal gobolka Occitania. Waxay ku taalaa Camino de Santiago Frances, markaa waa meel cadaalad ah oo dadku ku badan yahay. Magaalada gudaheeda waxaan ku arki karnaa wajiyo qurxoon oo dhagaxyo leh guryahoodii hore. Waa bastide, waa magaalo ka fidsan fagaara weyn oo weyn. Waxaa laga arki karaa Plaça des Cornieres, oo labo waddo ay ka bilaabmaan. Waxa kale oo aad arki kartaa kaniisadda quruxda badan ee San Bartolomé oo leh meel allabari oo baroque ah.
Tuuladan cajiibka ah waxay ku taal waaxda Dordogne, oo u dhow magaalada Sarlat. Waxay ku taal daanta wabiga Dordogne iyo dhagxaanta dhagxaanta qaar. Guryuhu waxay si indho sarcaad leh u eegaan dhagaxa dabcan sida ugu wanaagsan ee loo arko waa adiga oo doon ku raaca wabiga. Tuulada waxaad sidoo kale ku arki kartaa jardiinooyinka Marqueyssac, beero qurux badan oo sifiican loo ilaaliyay. Sida tuulooyin badan, midkani sidoo kale wuxuu leeyahay qalcad, ta Castelnaud la Chapelle
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Tuulooyinka ku yaal koonfurta Faransiiska ee ay tahay inaad booqato
Sidee ninku u soo jiidan karaa haweeneyda